Máy cạo râu Xiaomi có nên mua hay không và nên mua loại nào | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Máy cạo râu Xiaomi có nên mua hay không và nên mua loại nào | Muasalebang in Muasalebang
I-Xiaomi shaver iyindawo ekhanyayo emakethe yamazwe omhlaba, inokuheha kakhulu amadoda. I ama-shaver Lokhu kulinganisa cishe okuphelele engxenyeni yomshini obiza kancane. Ukuba nezinzuzo ezingenakubalwa ezivelele, amanani athengekayo, lokhu kuyisinqumo esihle kakhulu samadoda. Esihlokweni esilandelayo, sizobhekisela ndawonye Buyekeza i-Xiaomi shaver yinhle, okufanele umuntu ayithenge Ngiyacela!
1 Shaver brand Xiaomi
2 Buyekeza i-Xiaomi shaver ibiza imali noma cha?
3 Buyekeza i-Xiaomi shaver ukuthi yiluphi uhlobo oluhle? Ukuthenga okuhle kakhulu
3.1 3.1. I-Xiaomi Enchen Blackstone 3
3.2 3.2. Shaver Xiaomi Mijia S100 MSX 201
3.3 3.3. Ukubuyekezwa kwe-Xiaomi S500 shaver
3.4 3.4. I-Shaver Pinjing ES3
3.5 3.5. I-Zhibai Xiaomi SL2 shaver
4 Izinto okufanele uziqaphele uma usebenzisa i-Xiaomi shaver
Shaver brand Xiaomi
Impela, noma ngubani ujwayelene kakhulu negama elithi Xiaomi. Lona omunye wemikhiqizo ye-elekthronikhi engavamile ebizwa ngokuthi “made in China” esathola ukwamukelwa ngentshiseko kubathengi base-Asia.
I-Xiaomi yinkampani yangasese ekhiqiza izinto zikagesi eyasungulwa ngo-April 6, 2010. Ikomkhulu layo lise-Beijing, e-China. Ngemizamo engapheli kanye namasu okucwaninga amakhasimende, i-Xiaomi yenze inqubekelaphambili ngokushesha. Ngemuva kwesikhathi esifushane kuphela, i-Xiaomi isibe kubakhiqizi abakhulu aba-5 abakhulu eChina. Ngemikhiqizo yocingo, inkampani ingumkhiqizi wama-smartphone wesithathu ngobukhulu emhlabeni njengoba kwamenyezelwa ngo-2014.
Kuze kube manje, i-Xiaomi isakhula ngamandla ngenhloso yokusakazwa emhlabeni jikelele. Inqwaba yezinto zikagesi ezihlakaniphile zithembisa ukuletha i-Xiaomi udumo nemali engenayo. Lapho, I-Xiaomi shaver Futhi iwumkhiqizo okufanele uwuzwe ngokushesha.
Buyekeza i-Xiaomi shaver ibiza imali noma cha?
Ngezinzuzo zayo ezivelele, I-Xiaomi shaver ibilokhu futhi isetshenziswa kabanzi. Lokhu kubuye kuthathwe njengesixazululo esifanelekile sokuthi amadoda aveze ubuntu bawo. Nokho, ingabe lo mkhiqizo muhle ngempela, ingabe kuwufanele ngempela ukuthengwa? Impendulo izovezwa khona kanye ekwabelaneni ngezansi.
Inzuzo yokuqala eshiwo yikhono lokuhlanza intshebe ngokushesha okukhulu ngaphandle kokudala umonakalo esikhumbeni. I-Xiaomi shaver iklanywe nge-blade ephakeme ehlakaniphile, amajika angu-2 esimanje ukwandisa indawo yokuxhumana nendawo yokushefa kufika ku-50%. Lokhu kusiza abasebenzisi behlise ukuhlanzeka kobuso. Ngaphezu kwalokho, i-razor blade ebamba ubuso isiza abafana ukuthi basondele futhi bahlanzeke kunangaphambili izikhathi eziningi.
Okulandelayo umklamo ohlangene, olingana entendeni yesandla sakho, ngakho-ke kulula ukuwuphatha ukuya emsebenzini, ukuphuma noma ukuhamba isikhathi eside. Ukumelana namanzi kuhle kakhulu ezinguqulweni ezintsha ezifana ne-Xiaomi Enchen Blackstone 3 shaver enezinga le-IPX7 elingangeni manzi. Ngamanye amazwi, le modeli ingacwiliswa ekujuleni kwemitha elingu-1 imizuzu engama-30 ngaphandle komthelela omncane.
Indawo engcono kakhulu Ukubuyekezwa kwe-Xiaomi shaver umthamo webhethri “inyathi”. Impilo yebhethri yokushajwa okukodwa imizuzu engama-60 ngokuqhubekayo. Amanye amamodeli aze athathe amahora angu-3 nesigamu ukushaja amaminithi angu-120, abeke inselele ama-shaver asezingeni eliphezulu.
>>>Funda kabanzi: [Review] Imuphi umshini omncane wokususa izinwele ongcono kakhulu futhi ophephe kakhulu namuhla?
Buyekeza i-Xiaomi shaver ukuthi yiluphi uhlobo oluhle? Ukuthenga okuhle kakhulu
Ngezibuyekezo ezingenhla, nakanjani I-Xiaomi shaver izokulethela isimanga ngemva kwenye. Esikhundleni sokusebenzisa insingo evamile, thola imikhiqizo ye-Xiaomi yesimanjemanje, eyonga isikhathi neyonga izindleko ngezansi.
3.1. I-Xiaomi Enchen Blackstone 3
Lo mkhiqizo wokuqala uthathwa njengesikhali esiyimfihlo samadoda ukuthi abe nokubukeka okuhle nokukhangayo njalo lapho evela phambi kwesixuku. Shaver Xiaomi Enchen Blackstone 3 uhlala ephikisana kakhulu nama-shaver aphezulu emakethe. Isikrini se-LCD esinombukiso obukhali wempilo yebhethri nokumelana namanzi.
Kulo mugqa wokushefa, uzomangala ukumelana namanzi komzimba okugcwele kwe-IPX. Ungathola ukushefa okomile noma ukushefa okumanzi ngegwebu lokushefa ngokunethezeka. Ngaphezu kwalokho, ngemva kokusetshenziswa, uyihlanza ngaphansi kwe-faucet kalula futhi kalula.
I-Xiaomi Enchen Blackstone 3 shaver iklanywe nge-3D blade ezilolayo, ikhanda le-blade likhuphuka izikhathi ezi-3 ngezindwani zokushefa ezikabili ezi-3. Umshini uhlale usesimweni esibukhali, ulungele ukukhonza umnikazi ngentshebe ehlanzekile, ukudala isitayela esihle nesijwayelekile. Ngokuqondile, ubuchwepheshe bokulwa ne-anti-stick bomshini bunqoba ukungalungi kwamamodeli wangaphambilini.
Esinye isici esivelele salo mkhiqizo ibhethri yenyathi enesikhathi sokushaja esingaba amahora angu-1.5 kuphela. Kodwa ukuvumela ukusetshenziswa kufika emaminithini angu-150, okulingana nezinyanga ezingaba ngu-3.5 zokusetshenziswa. Idivayisi iphinde ifakwe isikhiya esihlakaniphile, ukusebenza okulula vele ucindezele futhi ubambe inkinobho yamandla imizuzwana emi-3.
Intengo yesithenjwa: 350,000 VND / umshini.
>>>Funda kabanzi: [Review] Imishini engu-8 engcono kakhulu yokuwaxisa izinwele ukuze isetshenziswe
3.2. Shaver Xiaomi Mijia S100 MSX 201
Ngenothi elilodwa nje, i-Mijia S100 mini shaver inamandla okuxazulula izinhlanga, ukubuyisela ubuhle nokuthandeka emadodeni. Usayizi ohlangene kodwa unonokusho, uthambile, ukhululekile ukuwuthwala futhi usetshenziswe noma yikuphi.
Lo mkhiqizo uklanywe ngama-double blades angagcini nje ukwandisa indawo yokushefa, okuvumela isivinini sokushefa ngokushesha. Ibuye ibe nokunwebeka okuphezulu, ngakho inciphisa ukucindezela ebusweni futhi igweme ukubangela ukulimala kwesikhumba sobuso. Ingxenye 2 yamakhanda emimese entantayo yenza umumo ongu-V, igone isilevu nomhlathi ongezansi womsebenzisi, ngakho inamandla okuthuthukisa ukuhlanza.
Ngaphezu kwalokho, i-Xiaomi Mijia S100 MSX 201 shaver nayo ifakwe injini yesivinini esiphezulu, efika ku-7200 rpm. Iza nomklamo we-shock absorber kanye nesakhiwo segiya, esenza sikwazi ukudlidliza futhi sinciphise imiphumela yomsindo ibe sezingeni elifanele.
Enye inzuzo ephawulekayo yale Xiaomi mini shaver ukuthi i-IPX7 ingangeni manzi, engasetshenziswa kuzo zombili izindawo ezomile nezimanzi. Ubuchwepheshe bokushaja ngokushesha ngembobo yohlobo C. Ngenxa yalokho, abasebenzisi badinga kuphela ukushaja ibhethri amahora angu-2, futhi basebenzise idivayisi ngokuqhubekayo imizuzu engama-90.
Intengo yesithenjwa: 299,000 VND/ umshini.
3.3. Ukubuyekezwa kwe-Xiaomi S500 shaver
Igama lesithathu emikhiqizweni emi-5 edayise kakhulu ye-Xiaomi shaver ngo-2021 i-Xiaomi S500. Ihlatshwe umxhwele umklamo olula onombala omnyama oqinile nomuntu siqu. Idivaysi eguquguqukayo yokushefa okomile noma okumanzi ngegwebu.
Umshini uhlela izindwani ezi-2 zibe imizuliswano emi-2, ngakho-ke ijubane lokushefa liphakeme ngo-50% kune-razor eyindilinga eyindilinga. I-blade iwugqinsi impela, inezingqimba ezi-2, ngakho-ke ingahlangabezana nemisebenzi eminingi eyahlukene. Ikakhulukazi ikhanda lokushefa elijikelezayo elingu-360-degree, eligcizelelwe ubuchwepheshe be-IFT, lisiza ummese ukuthi ushelele kahle futhi ube lula esikhumbeni.
Ngaphezu kwalokho, shaver Xiaomi Mijia Lo mshini uphinde ufakwe amagiya angu-2 anetorque yokusika ngokushesha nangokunembile. Ingxenye ngayinye imbozwe ngopende wezigxivizo zeminwe ze-PPG, enezinga lokumelana namanzi le-IPX7 ukuze lihlanzeke kalula ngemva kokusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, isikhathi sokushaja sifushane kakhulu, amahora angu-1.5 kuphela ngembobo yokushaja yohlobo C.
Intengo yesithenjwa: 990,000 VND/ umshini.
>>> Bona okuningi: [Review] Ingabe isinqamuli sezinwele zekhala silungile futhi siphephile?
3.4. I-Shaver Pinjing ES3
Kusukela ekuhlanganeni kokuqala, i-Xiaomi Pinjing 3D ES3 izuze ezinhliziyweni zamakhasimende ngomklamo wayo oyingqayizivele nokusebenza okuphezulu. Idivayisi ihlanganisa ikhanda lokusika le-3D ukuze lisikwe okuqondile. Ikakhulukazi, ngenxa yokuthi amakhanda ommese asebenza ngokuzimela, afaneleka emigqeni eminingi yobuso kanye nazo zonke izinkomba zokukhula kwentshebe. Ngaleyo ndlela, abasebenzisi bangashintsha i-engeli yokushefa kalula nangokuphepha kakhulu.
Okulandelayo yi-2-ring blade ye I-Xiaomi shaver ukwandisa indawo yokuxhumana phakathi kwe-blade kanye nendawo okumele igundwe. Ngentshebe eqinile, ethambile, ende, nezimfushane, le divayisi iyakwazi ukusika ngobunono ihlanzekile, ngaphandle kokushiya intshebe emagebhugebhu, engakhululekile. I-blade yenziwe ngensimbi yekhwalithi ephezulu evela e-Japan, isebenza ngokumelene ne-oxidation futhi ibukhali kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 450,000 VND / umshini.
3.5. I-Zhibai Xiaomi SL2 shaver
Landela abaningi Ukubuyekezwa kwe-Xiaomi shaver, umkhiqizo abantu abaningi abawuncoma kakhulu i-Zhibai SL2. Ngoba le divayisi inosayizi ohlangene kakhulu kunabanye abazalwane bomndeni wakwaXiaomi. Ubude bulingana kuphela nelula, enobukhulu obungu-50 x 25.5 x 63.5mm.
Lo mugqa wama-mini shaver nawo usebenza ubuchwepheshe obuthuthukisiwe. Insimbi engagqwali ingeniswa eJapan Toyota Corporation. Ngenxa yalokho, i-blade inikeza ukuqina okuphelele, ukusika ngisho nentshebe eqinile futhi eqinile kakhulu. Ama-blade amabili asebenza ngokuzimela ngokobuchwepheshe bokusika be-Swedish, ngakho-ke isivinini sokuzungeza sinamandla futhi sinquma sifika ku-8,500 rpm.
Iphuzu lokususa kuphela lalo mkhiqizo ukuthi isikhathi sokushajwa kwebhethri side kakhulu. Kuzokuthatha amahora angu-8 wokushaja ukuze unikeze idivayisi imizuzu engama-45 yokusetshenziswa okuqhubekayo.
Intengo yesithenjwa: 390,000 VND / umshini.
>>>Bheka ku: [Review] Iluphi uhlobo lwesiqeshana sezinwele olungcono kakhulu, oluthengiswa kakhulu ngo-2021?
Izinto okufanele uziqaphele uma usebenzisa i-Xiaomi shaver
Ukushefa kungenye yezinyathelo eziningi zokuhlanza umzimba amadoda okudingeka azenze ekhaya njalo. Eqinisweni, ukwenza lokhu kulula ukulimaza isikhumba, kanye nokulimaza kalula umshini. Ngakho-ke, udinga ukunaka lezi zindaba ezilandelayo ukuze ukwandise ukusebenza kahle kokusetshenziswa:
Landela imiyalelo yomkhiqizi ukuze uyisebenzise I-Xiaomi shaver.
Sebenzisa i-shaver kuphela, ungayisebenzisi kabi
Nakanjani ungasebenzisi ibhethri elisha ukushaja, kulula ukulibangela ibhodlela lebhethri futhi unciphise ukuphila kocingo.
Ngemuva kokusetshenziswa, kufanele ihlanzwe futhi igcinwe endaweni epholile, eyomile ukuze ivikeleke ngokugcwele ekusetshenzisweni ngakunye.
Ukushefa ngobumnene kodwa ngokuqiniseka, ungashefa ngokuphindaphindiwe endaweni efanayo yesikhumba.
Ungashayi ikhanda lokushefa entweni eqinile ngesikhathi sokuhlanza.
Khumbula ukuvala umshini uma ungasetshenziswa ukuvikela ukulimala okungafuneki esikhumbeni.
Nakhu okumele ukwazi ngakho I-Xiaomi shaver ukuthi amadoda akufanele azibe. Ungakhohlwa ukuvakashela Izibuyekezo Ezinhle nsuku zonke ukuze uhlale unolwazi lwakamuva ngezinye izindaba eziwusizo!
>>>Funda kabanzi: Ikhwalithi ephezulu engu-5 yamaflosa amanzi e-Xiaomi okufanele uwathenge namuhla
Xem Thêm Top 3 dòng Máy đọc sách Xiaomi nào tốt được tin dùng nhất | Muasalebang
Những điện thoại siêu mỏng nên mua | Muasalebang